Mandrahona Ny Hanakatona Ny Vohikala Fampitam-baovao Tsy Miankina Zambiana Ny Minisitra Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Mandrahona Ny Hanakatona Ny Vohikala Fampitam-baovao Tsy Miankina Zambiana Ny Minisitra Vaovao
Voadika ny 20 Febroary 2015 10:58 GMT
Ny minisitra vao notendrena hisahana ny Fampahalalàm-baovao ao Zambia, Chishimba Kambwili, dia nilaza ny hanakatona ny Zambian Watchdog, iray amin'ireo loharanom-baovao vitsy tsy miankina ety anaty aterineto, miompana amin'ny fitaterana resaka politika sy fanadihadiana.
Kambwili, izay nitantana ministera maro, toy ny Raharaham-bahiny ka hatramin'ny Asa, ary ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena, tamin'ny fitondran'ilay Filoham-pirenena nodimandry Michael Sata, dia nalaza tamin'ny ady politikany. Vao haingana no napetraky ny filoham-pirenena Edgar Lungu ho amin'ny toerany, izay vao telo herinandro monja ny governemantany, dia efa nahazo tsikera be tamin'ny media sosialy sahady i Kambwili.
Manara-maso mivantana ireo fampitam-baovao an'ny fanjakana ny Minisitry ny Fampahalalàm-baovao sy Fampielezampeo, toy ny “Zambia National Brodcasting Corporation“, “Zambia News and Information Service” , “Zambia Daily Mail” , ary ny “Times of Zambia“. Io ihany koa no mamoaka ny alalana fahafahana mampiasa onjam-peo sy mametra ny fetran'ny toerana ahafahana mandefa izany. Mitàna ny toeran'ny lehiben'ny mpitondra tenin'ny governemanta ihany koa ny minisitry ny fampahalalàm-baovao Zambiana.
Nivoady imasom-bahoaka i Kambwili, andro vitsy monja taorian'ny nanendrena azy:
Minisitra vao notendrena ho Minisitry ny Fampahalalàm-baovao sy Fampielezampeo, Chishimba Kambwili. Sary nampiasaina nahazoana alalana tamin'ny “The Independent Observer”.
Ahoana moa ny zavatra nalefa tamin'ny Aterineto no ho afaka hanomboka hitatitra faharatsiana olona iray mandritra ny 15 andro, tsy afaka ny hamela izany hitranga aho amin'ny maha Minisitry ny Fampahalalàm-baovao vao avy notendrena ahy. Raha mila ny FBI mba hanakatona tokoa ny Watchdog, hataoko izany […] Tsy mbola nanomboka zavatra ka tsy tafita aho, hakatoko tanteraka ny Watchdog, lazaiko aminareo izany.
Nihetsika tamin'ny fanambaràn'i Kambwili, ny Ivontoerana Panos ao Afrika Atsimo (PSAf), afaka kelikelin'izany, mihaika azy hiaro ny fampiroboroboana ny media malalaka ary maro karazana:
Mankahery ny Minisitra Kambwili izahay, mba hanao ho lohalaharana ny ady amin'ireo sakana maro amin'ny fivoaran'ny sehatry ny media ao Zambia. Mino ny PSAf fa, ny media mahaleo tena sy maro karazana ihany no afaka manome fampahafantarana sy fampahalalàm-baovao, izay afaka mampiroborobo ny fivoarana sy demaokrasia.
Tamin'ny hazakazaka ho fidiana ho filoha tamin'ny 20 Janoary, mba hanoloana ny Filoham-pirenena Sata teo aloha, izay maty ny 28 Oktobra 2014, nalain'i Kambwili ankeriny ny Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC), izay tantanan'ny fanjakana, ary norahonany horoahana ireo mpiasa rehetra tao. Nalefan'ny ZNBC tamin'ny vohikalany ny fanambaràn'ny lehiben'ny filankevi-pitantanany :
Tsy azo ekena, ary tokony helohina mafy mihitsy, ny zavatra nitranga tamin'iny alina iny, izay nanaovan'ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena Chishimba Kambwili ary ny PF Sekretera Jeneraly Lefitry ny PF,Anthony Kasolo, ankeriny ny Efitra fampitam-baovaon'ny ZNBC, nilàny vaniny sy nibaikoany an'i Mr Kenneth Maduma, Talen'ny Fampitam-baovao sy ny Fampandehanan-draharaha, teo anoloan'ireo mpiasany, mba hanala ireo tantara momba an'i Inonge Wina Hajaina sy Hakainde Hichilema, Filohan'ny UPND.
Tsy fanararaotam-pahefana sy heloka fotsiny ny fandrahonana ny hanalàna an'ingahy Maduma sy ireo mpiasany amin'ny asany, noho ny nanaovan'izy ireo ny asany, nataon'ingahy Kambwili, fa manàla ihany koa ny haja maha-olona azy eo amin'ny toerany anivon'ny fiarahamonina .
Nandà ny nanao an-keriny ny efitrano fitenenàn'ny ZNBC i Kambwili taty aoriana, nilaza fa nasain'ireo mpiasa birao izy sy Kasolo. Mazava ho azy fa nampiasa loha an'ireo mpisera anaty aterineto ny fanendrena an'i Kambwili, noho ilay zavatra nitranga.
Nanontany tena ny mpampiasa Facebook iray, Patrick Sikana, hoe ahoana àry no nanendren'ny Filoha Lungu an'i Kambwili, izay olona fantatra fa tsy mba mahay mandamin-dresaka. Nanoratra izao izy:
O Ramose! Ankoatra ny hoe fahefan'ny filoha io fanendrena io, nitady aho ka namerina nitady ny mety ho antony tao ambadiky ny fanendrena an'i Kambwili ho minisitry ny fampahalalàm-baovao. Niezaka ny hahazo antony mazava … nifarana tamin'ny vinavina aho:
Tsy ny mofontsika na ny doberantsika no lohalaharana amin'ny laharam-pahamehan'ny Filoha amin'izao fotoana izao. Ny ho voafidy indray amin'ny taona manaraka. Latsaky ny 2 taona sisa dia ho tonga izany fifidianana izany, zavatra 2 no fantratry ny Filoha: mandeha toy ny lasantsy ny fotoana, ary (na dia mahamenatra tokoa aza), fantany fa tsy ny maha olom-banona no hampandresy amin'ny fifidianana any Zambia. Fa ny fampielezan-kevitra.
Noho izany, tsy mpanolotsaina aminà fampitam-baovao no ilainy, izay handany andro amin'ny “fieritreretana” ny ho vokatry ny zavatra teneniny. Mila olona izay hisolo vaika azy handroaka ny fivalanan'ny teny feno esoeso, teny faneva poakaty, hafatra mandetika ary lainga marivo tototra… tsy mahalala fomba, izy. Tsy misy olona manana izany toetra izany tsara ankoatra an'i Kambwili. Olona atao ho “marani-tsaina” aty!
Niarahaba ny fanendrena an'i Kambwili ny Zambia Union of Journalists (ZUJ) (Sendikà-n'ny Mpanao Gazety Zambiana), Sendikà misolo tena ny mpiasa amin'ireo tranobe famoahanm-baovao an'ny fanjakàna. Amin'ny maha Minisitry ny Asa azy (toerana izay notànany talohan'izao fanendrena azy ankehitriny izao), nampanantena ny hamaha ny olana ara-bola ao amin'ny Times of Zambia i Kambwili, fanambaràna izay mbola nohamafisiny fony izy nianiana ho minisitry ny fampahalalàm-baovao.
Niarahaba ny fanendrena an'i Kambwili tao amin'ny pejy facebook-ny ny Sekretera Jeneralin'ny ZUJ, Angela Chishimba:
Faly amin'ny fanendrena an'i Chishimba Kambwili Hajaina ho Minisitry ny Fampahalalàm-baovao sy ny Sampana Fampitam-baovao ny Zambia Union of Journalists (ZUJ). Olon'ny asa no nahafantarantsika an'ingahy Kambwili, ary mino izahay fa handray andraikitra manoloana ireo fanamby atrehan'ireo mediam-bahoaka izy. Tsaroinay ny zavatra nataony mba hanampiana ireo mpiasan'ny “Times Printpak Zambia Limited” fony izy Minisitry ny Asa.
Efa nihatrika fandrahonana hakatona ny Zambian Watchdog teo aloha. Efa imbetsaka no nahitsoka ilay vohikala, tao Zambia, ary nisy ireo mpitati-baovao nosamborina noho ny fiahiahiana azy ireo ho miara-miasa amin'ilay vohikala.
Nilaza izao ny Media Legal Defence Initiative (MLDI) (Hetsika Ho Fiarovana raka ny Lalàna ny Media) izay any Angletera, tao amin'ny fanambaràny taorian'ny fandrahonan'i Kamwili hanakatona ilay vohikalam-baovao
Mazava fa mikatsaka ny hanampim-bava, noho ny tahotra, ny iray amin'ireo loharanom-baovao vitsy tsy miankina any Zambia, ny fanambaràna nataon'ingahy Kambwili. Ny andraikitray dia ny hanampy ny media tsy miankina mba tsy hilefitra eo anatrehan'ny fandrahonana sy fanamby tafahoatra ny lalàna tahàka izany. Hanohy hiaro ny Zambian Watchdog foana izahay, sahala amin'ny nanohananay ireo media tsy miankina hafa maneran-tany.
23 ora izayEl Salvador